Zambia: Lahatsary Fanadihadiana Ao Amin’ny YouTube Mikasika Ny Fiantraikany Ratsy Momba Ny Fitrantrandrahana Varahina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Oktobra 2012 9:34 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Swahili, македонски, Español, Ελληνικά, বাংলা, polski, Italiano, Deutsch, 繁體中文, 简体中文, English
Nisy lahatsary fanadihadiana iray mikasika ny fitrandrahana varahina any Zambia sy ny fiantraikany ratsy eo amin'ny fiarahamonina nipoitra tao amin'ny YouTube ary hatreto dia nahazo mpitsidika maherin'ny 6.000.
Ilay lahatsary “Zambia: Good Copper, Bad Copper” (Varahina tsara, varahina ratsy) no voalohany indrindra voatatitry ny Zambian Economist tao anatin'ny tontolon'ny bilaogy. Chola Mukanga, mpamorona ilay bilaogy, nanoratra:
Lahatsoratra fanadihadiana matanjaka mikasika ny fangalarana ara-toekarena amin'ny fitrandrahana varahina any Zambia sy ireo vokany mifandray amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana. Misy ireo olana noresadresahinay imbetsaka tao anatin'ity habaka ity nefa tsara ny mahita azy ireo mivondrona ho iray anatin'ity lahatsary ity. Novokarina ny Aprily 2012 io lahatsary io. Indrisy, mila mpanao gazety tsy Zambiana hanambatra lahatsary fanadihadiana tahaka ity. Aiza ireo mpanao gazety mpanadihadintsika?
Mpampiasa aterineto maro no naneho ny fihetsehim-pony tamin'io lahatsary io. Namaly i George Chisenga:
tsy fantatro akory izay holazaina fa ny hany azoko ambara dia ny hoe rikoriko aho ary tena tsy fantatrareo izay azontsika atao hanipazana ny kodiakely ho amin'ny tombontsoantsika amin'ny maha-zambiana antsika indray andro any
Latsa-panenena i TheJosok:
Mitomania ho an'ny tanindrazana malalantsika.
Maninona isika no hahantra raha misy vokatra misavovona sy trandrahana nefa manimba ny fahasalamam-bahoaka
Saritanin'i Zambia mampiseho ny toerana fitrandrahana varahina any Zambia. Sary navoakan'ny mpampiasa Wikipedia Acntx teo ambany ny Creative Commons (CC BY-SA 3.0).
Nanoratra i gogohasme2:
[…] Zambiana koa aho ary taorian'ny nijereko an'io, mieritreritra aho fa mila mivondrona isika ary miezaka hiady ho an'ny tanindrazantsika fa tsy hijery fotsiny io lahatsary io sy hamela izany fotsiny, mila tonga aminà zavatra iray isika, tsy andeha hiteny isika fa MMD Na PF NO NANAO IZANY, afaka mijoro sy mamela ny feontsika ho heno isika ..
Ireo Zambiana vitsy dia afaka manantena fa tsy hijery io lahatsary fanadihadiana io fotsiny ihany ireo mpitarika politika eo amin'ny firenena fa hanao izay andraikiny mikasika izany ihany koa.